Salesflare: Ny CRM ho an'ny orinasa madinika sy ekipa mpivarotra mivarotra B2B | Martech Zone
Talata, Novambra 16, 2021 Talata, Novambra 16, 2021 Douglas Karr
Raha niresaka tamin'ny lehiben'ny varotra ianao dia ny fampiharana ny fitantanana ny fifandraisana amin'ny mpanjifa (CRM) sehatra dia tsy maintsy… ary matetika koa ny aretin'andoha. ny tombony amin'ny CRM Mihoatra lavitra noho ny fampiasam-bola sy ny fanamby, na izany aza, rehefa mora ampiasaina ny vokatra (na namboarina amin'ny fizotranao) ary ny ekipan'ny varotrao dia mahita ny sandany ary mandray sy mampiasa ny teknolojia.
Toy ny amin'ny ankamaroan'ny fitaovam-pivarotana, misy fahasamihafana goavana eo amin'ny endri-javatra ilaina amin'ny orinasa kely sy mavitrika noho ny orinasa iraisam-pirenena. Raha orinasa madinika manompo ny tsena B2B ianao, Salesflare manana endri-javatra tsy manam-paharoa izay mahatonga ny fananganana sy ny fampiasana tena tsotra… ary ahafahan'ny ekipan'ny varotrao hahita ny tombony sy hankasitraka ny sehatra.
Salesflare: CRM mora ampiasaina
Salesflare no marani-tsaina kokoa, CRM maoderina ho an'ny orinasa madinika. Raha reraky ny fampidirana an-tànana ny angon-drakitra mpanjifa ianao ary mandany fotoana amin'ny fitetezana rafitra sarotra, dia mety ho anao ny Salesflare. Salesflare dia mitambatra tsara amin'ny kaontin'ny asanao, mampifanaraka ny mailaka, ny fivoriana, ny sonia mailaka, ny fanaraha-maso mailaka ary ny maro hafa.
Amboary ny ezaka ataonao amin'ny varotra miaraka amin'ireto endri-javatra manaraka ireto:
Ny zava-drehetra amin'ny toerana iray - Boky adiresy, fandaharam-potoana fifandraisana, asa, rakitra, fantsona ary maro hafa.
Visual pipeline - fomba fijery mazava sy azo zahana amin'ny fantson'ny varotrao.
Asa & soso-kevitra momba ny asa – Aza alatsaka amin'ny laharana intsony ny baolina.
Fizarana ekipa - miara-miasa amin'ny ekipanao tsy misy kilema.
Saha mahazatra - araho ny angon-drakitra mpanjifa rehetra azonao alaina sary an-tsaina.
Mitady – tadiavo avy hatrany izay rehetra ilainao.
Fampandrenesana mivantana - mahazo fampandrenesana vaovao na oviana na oviana, na aiza na aiza, amin'ny fitaovana rehetra.
Dashboard Insights – mahafehy ny isa.
Ataovy ho azy ny fizotran'ny varotrao mba hahazoana fahombiazana ambony indrindra:
Boky adiresy mandeha ho azy - automatique tanteraka ny fifandraisanao sy ny mombamomba ny orinasa - ajanony ny fidirana amin'ny tanana ny angon-drakitra momba ny fifandraisana sy ny orinasa.
Timeline mandeha ho azy - ny fandaharam-potoananao dia ampifandraisina amin'ny mailaka, ny fivorian'ny kalandrie ary ny tantaran'ny antso an-telefaona.
Fitehirizana rakitra mandeha ho azy - tehirizo moramora ny lahatahiry antontan-taratasy ho an'ny mpanjifanao.
Timeline miaraka amin'ny fanavaozana Twitter - alaivo hatrany ny vaovao farany momba ny mpanjifanao amin'ny alàlan'ny mombamomba azy.
Mandefasa mailaka mandeha ho azy mifototra amin'ny trigger - automatique ny fanaraha-maso mailaka mifototra amin'ny trigger azonao apetraka mivantana ao amin'ny CRM.
Hatsarao ny fifandraisanao ary mitondra varotra bebe kokoa raha mampihena ny tsingerin'ny varotra:
mailaka sy fanaraha-maso amin'ny Internet – Makà sary feno momba ny fomba fifandraisan'ny mpitarika sy ny mpanjifa amin'ny orinasanao.
fifandraisana – jereo mora hoe iza no efa fantatry ny mpiara-miasa aminao – ary iza no tena fantany.
Fampandrenesana naoty/fahafanana - fantaro ary ataovy laharam-pahamehana ny fitarihanao miaraka amin'ny fanairana mafana.
mailaka marobe - mandefa mailaka fanaraha-maso manokana amin'ny ambaratonga.
Ampidiro amin'ny sehatra hafa ny CRM:
Email sidebars ho an'ny Gmail & Outlook - ampiasao ny Salesflare nefa tsy mamela ny mailakao.
Fampiharana finday ho an'ny iPhone & Android - farany, rindranasa CRM izay manome fiasa feno avy amin'ny findainao.
HAFA API – tsotra: Ny API Salesflare dia azo ampifandraisina amin'ny fampiharana hafa.
Fampidirana 1000+ - Salesflare dia manolotra fampidirana teratany sy fidirana amin'ny fampidirana fampiharana 1,000+ amin'ny alàlan'ny Zapier ary koa ny teratany.
Andramo ny Salesflare maimaim-poana
Fanambarana: mpiara-miasa amiko aho Salesflare.
Tags: android crmb2bb2b crmmailaka fivarotana betsakaCRMtombony crmiOSiOS crmscoring firakaLinkedInfinday fampiharanafinday crmfampahatsiahivanatoe-tsainafantsom-pivarotanaasa varotrasalesflarefandraharahana madinikacrm orinasa kelyzapier
Ny herin'ny angon-drakitra: ny fomba fampiasan'ny fikambanana mpitarika ny angona ho tombony azo amin'ny fifaninanana